सर्वोच्चले अख्तियारलाई सोध्यो - बाबुराम भट्टराई र माधव नेपाललाई किन मुद्दा नचलाएको? :: Setopati
सर्वोच्चले अख्तियारलाई सोध्यो - बाबुराम भट्टराई र माधव नेपाललाई किन मुद्दा नचलाएको?
शोभा शर्मा काठमाडौं, फागुन २
सर्वोच्च अदालतले पूर्व प्रधानमन्त्रीद्वय माधव नेपाल र बाबुराम भट्टराई माथि मुद्दा नचलाएको विषयमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगसँग जवाफ माग गरेको छ।
सरकार प्रमुखले गरेका नीति निर्णयमा आफूले मुद्दा चलाउन सक्ने अधिकार नभएको अख्तियारले विशेष अदालतमा दायर गरेको अभियोगपत्रमा उल्लेख छ।
सम्बन्धित भिडिओ -